Chipiri, Gunyana 13, 2015 Mugovera, Chivabvu 7, 2016 Douglas Karr
Iwo ekutanga makuru ekushambadzira eruzivo ndeekuti iwe unogona kuongorora uye kuwana seti yetarisiro zvichienderana nekufanana kwavo nevatengi vako chaivo. Haisi mamiriro matsva; tanga tichishandisa data kwemakumi mashoma emakore ikozvino kuita izvi. Zvisinei, maitiro acho ainetsa. Isu takashandisa kudhonza, shanduko uye mutoro (ETL) maturusi ekudhonza data kubva kunzvimbo zhinji kuvaka dura repakati. Izvo zvinogona kutora masvondo kuti zviitwe, uye kuenderera
Chitatu, Kukadzi 4, 2015 Chitatu, Kukadzi 4, 2015 Douglas Karr
Vanopfuura hafu yevashambadzi vese vanotenda kuti yakasviba data ndicho chipingamupinyi chikuru pakuvaka chirongwa chakabudirira chekushambadzira. Pasina dhata remhando yepamusoro kana data risina kukwana, urikushaya mukana wekunyatso tarisa uye kutaurirana neako tarisiro. Nekudaro, izvi zvinosiya mukaha mukwanisiro yako yekuona kuti uri kusangana nezvido zveboka rako rekutengesa zvakare. Kushanda kwekutengesa chikamu chehunyanzvi chinokura. Iko kugona, ine data rakakura, kunongedza tarisiro, kuvashandura kuita zvinotungamira,